I-Outdoor Emergency Portable Ultrainst and Out Panel China Manufacturer
Inkcazo:I-Ultra Thin efanelekileyo,IiPaneli zePlanga,Ukutshatyalaliswa kwangaphandle kwexesha eliphuthumayo
I-Ultra Thin efanelekileyo,IiPaneli zePlanga,Ukutshatyalaliswa kwangaphandle kwexesha eliphuthumayo
Home > Imveliso > Bank Power Solar > Ishaja seSolar > I-Outdoor Emergency Portable Ultrainst and Out Panel
I-Outdoor Emergency Portable Ultrainst and Out Panel
Isitya se-solar yangaphandle esithwala ngaphandle, izixhobo ezintsha zokuhlawula ngaphandle, indawo enokukhanya kwelanga, ivumela ukuba uhambo lwakho lube nekhuseleko ngakumbi.
Isizukulwana esitsha seepaneli eziphuculweyo zelanga, kusetyenziswa i-silicon e-monocrystalline yangaphandle, ingqiqo engacacanga, eyalelwe ukuhamba.
Kukhanya kwaye kunezinga eliphezulu lokuguqulwa kuneepaneli eziqhelekileyo zelanga. Intlawulo yokuguqulwa inokuphindwa kathathu, kunye nokuguqulwa kwamandla welanga kufikele kuma-25 ekhulwini, elula, elula kwaye ekhawuleza. I-Ultra Thin efanelekileyo.
Isantya somrhumo wohluhlu lokwehlukana ngokukhawuleza kunokuba kuyimfuneko kumhambi. Ukutshatyalaliswa kwangxamisekileyo ngaphandle . Egcwele iibhethri ezi-3000mAh, ukuya kwiiyure ezingama-4, ukuhlawula kwexesha langoku ku-1.5a, kuphakamileyo kakhulu kunoko ngokuqhelekileyo ukuhlawula ifowuni yeselula.
Ukuxhotyiswa nge-stabilizer ye-voltage ehlakaniphile, ukuveliswa kwamandla, ukutshabalalisa okuzinzile, ukunyaniseka okuthembekileyo.
Impahla yelanga ye-suntan engenamanzi, ngaphandle kwemali
Uyilo olulodwa, oluya kuthwala kwaye luxhonywe, lukulungele ukuqhuba. Iipaneli zelanga
Ayikho ibhetri eyakhiweyo. Awudingi ukuxhalabisa ngeengxaki ezitshatyalaliswayo ukufudumala
Unxibelelwano oluqinileyo kunye nesicelo esiphezulu. Iyakwazi ukubona ukulawulwa kwangaphakathi kwintlawulo yefowuni yeselula, ukuphuma kwezinto ezikhoyo ngoku, ngokuzenzekelayo ukufanisa amandla okushaja, kwaye ungalimazi umshini
Iikhathalo zomkhiqizo : Bank Power Solar > Ishaja seSolar
I-Ultra Thin efanelekileyo
Ukutshatyalaliswa kwangaphandle kwexesha eliphuthumayo
Iimodyuli zePV eziqhelekileyo
Ipompo yamanzi elangaleleyo